မီးပြတိုက်: လူငယ်၊ ပညာရေးနှင့် အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံ
လူငယ်၊ ပညာရေးနှင့် အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံ
Posted by SLIP in လူငယ်၊ ပညာရေး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ
စက္ကန့်နဲ့အမျှ တိုးတက်နေ့သော ယနေ့ အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ ခေတ်ကြီးမှာ လူသားတွေရဲ့ တွေးခေါ်ကြံဆ အကောင်ထည်ဖော်မှုတွေကို လူသားတွေကိုယ်တိုင် လိုက်လို့မမှီနိုင်ဖြစ်နေပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ နိုင်ငံကဲ့သို့သော ဖွံ့ဖြိုးဆဲ သာမန်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာသော ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများထက် ခြေလှမ်းပေါင်းများစွာ နောက်ကျကျန်ခဲ့ရာ ရှေ့တွင်ရှိသော ထိုနိုင်ငံကြီးများကို ကျော်တက်ရန်ဆိုသည်မှာ တတိယအဆင့်၊ ဒုတိယ စဉ်းစားရမည်မှာ အမှီလိုက်ဖို့နှင့် ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်ရမည်မှာ ကွာဟနေသော ခြေလှမ်းများကို ဒီထက်ပိုမကွာသွားအောင်နှင့် ကွာဟနေသော ခြေလှမ်းများကို တဖြည်းဖြည်းခြင်း အရေအတွက် နည်းအောင် ကြိုးစားရပေမည်။ ဤသို့ ကြိုးစားရန်မှာ ယနေ့မြန်မာလူငယ်အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပေသည်။ နောင် ၁၀ နှစ်မှာ ကွာဟနေမည့် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကြားတွင် ရှိသော ခြေလှန်းအရေအတွက်သည် ယနေ့ မြန်မာလူငယ်များအပေါ်တွင် လုံးလုံးလျားလျား မူတည်နေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းပင် ကျနော်တို့နိုင်ငံအနေနှင့် ခြေလှန်းပေါင်းများစွာ နောက်ကျနေရာ အမှီလိုက်ရန်အတွက် သူများ ခြေတစ်လှမ်း လှမ်းချိန်မှာ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ၃-၄ လှမ်း လှမ်းနိုင်ဖို့ လိုသည်။ ၃-၄ လှမ်း မလှမ်းနိုင်သေးလျှင်လည်း သူများ တစ်လှမ်း လှမ်းချိန်မှာ သူများထက် နဲနဲ ပိုကျယ်တဲ့ ခြေလှမ်း တစ်ခုတော့ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် လှမ်းနိုင်မှ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း အချို့က မလှမ်းနိုင် လှမ်းနိုင်ဖြင့် ခြေတစ်လှမ်းချင်းကို လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ် လှမ်းနေမည်၊ လှမ်းနိုင်တဲ့သူတွေက ခိုကပ်နေမည် (သို့) သူတပါးနိုင်ငံရဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို တွန်းအားပေးတဲ့ သံခွာဖြစ်နေမည် ဆိုလျှင်တော့ နောင် ၁၀ နှစ်လည်း မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ ထူးထူးခြားခြား ရှေ့တိုးသွားမည် မဟုတ်ပေ။
ပထမဆုံးနှင့် အခြေခံအကျဆုံး တည်ဆောက်မှုမှာ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ပညာအရည်အချင်း (အသိပညာရော၊ အတတ်ပညာပါ) မြှင့်တင်ရန်၊ ခံယူချက်မြင့်မားရန်နှင့်၊ မျိုးချစ်စိတ်ရှိရန်ဖြစ်သည် (မျိုးချစ်စိတ် ဆိုခြင်းထက် နိုင်ငံတော်ကို ချစ်သည့်စိတ်ဆိုလျှင် ပိုမှန်မည်)။ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပေါ်ရေးသာမက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအားလုံးကို ပညာရေးဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်ပေသည်။ ပညာမတတ်သေးသောသူများကို ပညာသင်ရန် နားလည်အောင်ပြောပြဖို့လိုအပ်သလို၊ ပညာတတ်ပြီးသား လူငယ်များကလည်း ဆထက်တပိုး ပိုတတ်အောင်ကြိုးစားရန် နှင့် မိမိတတ်ထားသော ပညာဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွက် အထောက်အကူပေးရန် လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံတော် အတွက် ပညာတတ်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်သည့် နိုင်ငံသား မှာ ပညာမတတ်သည့် နိုင်ငံသားတစ်ဦးနှင် နှင့် နိုင်ငံအပေါ် အကျိုးပြုမှု အတိုင်းအတာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့် ပက်သက်ပြီး http://www.mee-pya-tite.com/2009/08/blog-post.html မှာ ကျနော် ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တောထဲတောင်ထဲမှာ နေသူထက် ရွာထဲမှာနေသူက အသိစိတ်၊ အသိပညာ ပိုရှိသည်။ ရွာမှာနေသူထက် မြို့မှာနေသူက ပိုသာ သလို မြို့ထဲမှာမှ မြို့ကြီးများမှာနေသူများက မြို့နှင့်ချီသော အတွေးများ၊ နိုင်ငံနှင့် ချီသော အတွေးများ တွေးတတ်လာသည်။ ထိုထက်မက နိုင်ငံခြားရောက် လူငယ် ပညာတတ်များက ကမ္ဘာနှင့်ချီပြီး တွေးတတ်၊ မြင်တတ်လာသည်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို သိမြင်လာပြီး အားနည်းချက်များကို မိမိတို့ တက်နိုင်သလောက် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသင့်သည်။ မိမိရောက်ရှိနေသောနိုင်ငံ၏ အားသာချက်များ၊ အတုယူစရာများကို မှတ်သားပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများကို အတုယူဖို့ ပြောပြသင့်သည်။ မိမိတတ်ကျွမ်းသော ပညာဖြင့် မိမိနိုင်ငံတော်ကို ရှေ့ရောက်အောင် တွန်းပို့ရပေမည်။ ”နှမ်းတစ်စေ့နှင့် ဆီမဖြစ်နိုင်” ဟူသော အသိထက် ” နိုင်ငံတော်အတွက် ငါသည် နှမ်းတစ်စေ့ဖြစ်ရမည်” ဟူသော အသိက ပိုအရေးကြီးသည်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံ ခြေလှမ်းအချို့နောက်ကျခဲ့ခြင်းမှာ နိုင်ငံသားများ၏ အရည်အချင်း ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲ သူများ လှမ်းနေချိန်မှာ မလှမ်းပဲ ရပ်နေခဲ့ခြင်းကြောင်းသာ ဖြစ်ကြောင်းကို နိုင်ငံခြားမှာသာမက နိုင်ငံတွင်းမှာ ရှိသော ထူးချွန်ထက်မြက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များက အကြိမ်ကြိမ် သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားမှာ မြန်မာတစ်ယောက် အရမ်းထူးချွန်သည့် အခါတိုင်းလည်း မောင်ဖြူ တော်သည်၊ မဖြူ တော်သည် ဟု မည်သူမျှမပြောပဲ မြန်မာတွေ တော်ကြတယ် ဟူ၍သာ သိကြသည်။ မောင်ဖြူ စာရိတ္တကောင်းလျှင်လည်း မြန်မာတွေ အကျင့်ကောင်းတယ်၊ အလုပ်ကြိုးစားလျှင်လည်း မြန်မာတွေ ခိုင်းလို့ကောင်းတယ် ဟူ၍ အသိမှတ်ပြုကြသည်။ ထိုသို့ပင် မဖြူ ညံ့ရင်သော်လည်းကောင်း၊ ကလိမ်ကကျစ်ကျလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ခေတ်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အပျော်အပါး မက်မောလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးနောက်ကိုလိုက်ပြီး ကြေးစားမယားတစ်ပိုင်း လုပ်လျှင်လည်းပဲ မြန်မာဆိုတာ ဒါမျိုးပါလား ဟူသော အသိသာ နိုင်ငံခြားသားတို့ ရရှိသွားကြပေမည်။
အရာရာတိုင်းမှာ အကောင်းနှင့်အဆိုး ဒွန်တွဲနေသောကြောင့် အကောင်းတွေကို တံခါးဖွင့်လိုက်သည်နှင့် အဆိုးတွေကိုပါ ခေါ်ပြီးသား ဖြစ်နေတတ်တာ ထုံးစံဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ ရှေ့သို့တွန်းသော ခြေလှမ်းအရေအတွက်က နောက်ကိုပြန်ဆွဲနေသော ခြေလှမ်း၊ ဘေးတိုက်ဆွဲနေသောခြေလှမ်း၊ လုံးဝ မတွန်းသောခြေလှမ်းနှင့် တွန်းသလိုလိုနှင့် ခိုစီးလိုက်ပါနေသော ခြေလှန်းအားလုံး၏ အရေအတွက်ထက် များနိုင်ပါမှ တစ်လှမ်းဆိုလျှင် တစ်လှမ်း သိသိသာသာ ရှေ့သို့ ရွေ့နိုင်လိမ်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ခြေလှမ်းများစွာ နောက်ကျရခြင်းမှာ ခြေထောက် တစ်ချောင်းတည်း ရှိသောကြောင့်လား၊ ခြေရာကောက်ရင်း ခြေရာပျောက်ခဲ့လို့လား၊ စောသေးလို့အကြောပေးခဲ့တာကြောင့်လား၊ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲခြင်းကြောင့် နောက်တစ်လှမ်းကို ဆက်မလှမ်းခဲ့တာလား အဖြေအတိအကျသိရဖို့ထက် အဖြေရှာရင်း ခြေလှမ်းတွေ ထပ်ပြီးမကွာစေဖို့ သတိပြုရပေမည်။ ရှေ့နိုင်ငံတွေ လှမ်းသွားသော ခြေလှမ်းများကို လိုက်ရှာရမည်၊ ခြေရာကောက်မိလျှင် မည်သို့လှမ်းသွားကြောင်း သိရအောင် လေ့လာရမည်၊ လေ့လာပြီးနောက် ထိုခြေလှမ်းထက်သာအောင် မည်သို့လှမ်းရမည် ဆိုသည်ကို စဉ်းစားရမည်။ ထို့နောက် ထိုခြေလှမ်းအတိုင်း (သို့) ထိုခြေလှမ်းထက်သာအောင် လိုက်လှမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစားရမည်။
ဥပမာ- ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတွေမှာ သုံးတဲ့ နည်းပညာ စနစ်တစ်ခုကို
အဆင့် ၁။ System ကို သုံးကြည့်ရမည်၊
အဆင့် ၂။ မည်သို့လုပ်ခဲ့ကြောင်း သိအောင် လေ့လာရမည်၊
အဆင့် ၃။ ပြုပြင်တတ်အောင် လေ့လာရမည်၊
အဆင့် ၄။ ထို System နှင့် တစ်ပုံစံတည်း ပြည်တွင်းမှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး (သို့) ပြည်ပ အကူညီနှင့် လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမည်။ ပြုလုပ်ရမည်။
အဆင့် ၅။ မူလ System ထက် သာလွန်သော System တစ်ခု၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနေအထား၊ ရာသီဥတုနှင့် လိုက်ဖက်အသုံးဝင်သော System တစ်ခု ကို အကောင်ထည်ဖော်ရန် ကြိုးစားရမည်။ အကောင်ထည်ဖော် ရမည်။
အဆင့် ၆။ နိုင်ငံခြား သိပ္ပံပညာရှင်တို့ Research လုပ်နေသော System များ နှင့် Idea များ ကို လေ့လာရမည်။
အဆင့် ၇။ ထို Research နှင့် Idea များကို ကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်း ဖြန့်ဝေရမည်။ စိတ်ဝင်စားလာအောင် နှိုးဆော်ရမည်။ အတွေးတွေကို ရယူရမည်။
အဆင့် ၈။ ထို Research နှင့် Idea များကို ဖြစ်နိုင်ကြောင်း (သို့) မဖြစ်နိုင်ကြောင်း မိမိတို့က ဦးစွာ သက်သေပြနိုင်အောင် ကြိုးစားရမည်။
အဆင့် ၉။ အကောင်ထည်ဖော်ရမည်။ ဖြစ်သည်။
mg says 16 July 2010 at 01:05
Ideaလေးတွေအရမ်းကောင်းပါတယ်..အမြဲအားပေးနေလျှက်ပါ...နိုင်ငံအတွက် အုတ်တချက်သဲတပွင့်အဖြစ်သော်၎င်း နှမ်းစေ့တစ်စေ့အဖြစ်သော်၎င်း မိမိတို့တတ်စွမ်းသရွေ့ လူတိုင်းလူတိုင်း ကြိုးစားကြမည်ဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ခေတ်နောက်ကျန်ခဲ့မည့် နိုင်ငံအဖြစ် ရောက်ရှိတော့မည် မဟုတ်ပေ...မိမိလည်း ကြိုးစား အများကိုလည်း ကြိုးစားလာချင်အောင် အားပေးရမှာသည် အားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပေသည်...
layaung says 13 December 2010 at 07:32
အေးဗျာ..ခင်ဗျား ပြောတာ တော်တော်လေး သဘာဝ ကျတယ်ဗျာ...တော်တော် လေးကောင်းတဲ.
အတွေးအခေါ် ပဲ ။ အသက် ၂၅ ပဲ ရှိသေး ပြီး ဒီလိုမျိုး တွေးခေါ် နိုင်တာ ကို လေးစားပါတယ် ဗျာ..
ဒါမျိုး ပို.စ် လေး တွေ များများ ရေး ပါ ဗျာ....
What is Buddhism? (ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတာ ဘာလဲ ??)
သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ Idea အချို့
Spain and World Cup 2010